WordPress.com? Nasi isizathu sokuba ndiyisebenzise kuqala. | Martech Zone
WordPress.com? Nasi isizathu sokuba ndiyisebenzise kuqala.
NgoLwesithathu, Matshi 13, 2013 Lwesine, Matshi 14, 2013 UJohn Blue
I-WordPress yenye yezona ziphambili Amaqonga okubloga iyafumaneka kwaye iza ngeendlela ezimbini, WordPress.com kwaye WordPress.org.
Ifom yokuqala, WordPress.com, yinkonzo yorhwebo enikezela ngezixhobo zokubloga zasimahla nezihlawulelweyo (kusetyenziswa iWindowsPress ngokuqinisekileyo) kwiwebhu. I-WordPress.com isebenzisa ifayile ye- isoftware njengenkonzo imodeli (aka SaS), ukugcina izixhobo zebhlog zesoftware kunye nokunyamekela izinto ezinje ngokhuseleko kunye nokuhanjiswa komxholo (ibhendi, ukugcinwa, njl.
Ifom yesibini, WordPress.org, luluntu olunceda ekuphuhliseni nasekugcineni i Vula Umnikezi Inguqulelo yesoftware yeWordPress. Isixhobo sokubhloga seWordPress sisonke sinokukhutshelwa kwaye sifakwe kwikhompyuter, kwiserver, okanye kumnikezeli wokubamba owukhethile. Ukuseta kusezandleni zakho kwaye unoxanduva lokubonelela ngokhuseleko oluyimfuneko kunye nokuhanjiswa komxholo.
Kutheni le nto unokukhetha enye kwenye?
Masiqale ngesizathu sokuba iWordPress.com iqale. Khumbula, babonelela ngesoftware ekulungele ukuya njengebhlog. Ukuseta onoxanduva lwakho, ukuba uyafuna, kukuyila inkangeleko yebhlog yakho. Izinto ezinje ngemixholo okanye ubeko ziyafumaneka ukuze uzilungiselele. Kukho okungagqibekanga kwaye iWordPress.com ibonelela ngeziphakamiso. I-WordPress.com ikwabonelela ngeseti elungileyo widgets kwaye plugins, Ezizixhobo zebhlogi ezincinci ezongeza amanqaku kunye nokusebenza kwebhlog yakho. Umzekelo, ufuna isalathiso sezithuba zebhlog ezidlulileyo? Kukho ifayile ye- Indawo yokugcina iwijethi. Ngaba ufuna ukubonisa iifoto zakho zamva nje kwiFlickr? Kukho i Iwijethi yeFlickr.
I-WordPress.com ikwayishishini lokuthengisa, ukubonelela ngezinto ezongezelelweyo ukunceda ukuphucula ibhlog yakho. Ezi zinto zongezelelekileyo zinexabiso, nangona zingabizi kwaphela, kwaye zinceda ukwakha ibhlog yakho nangakumbi. Umzekelo, imixholo emiselweyo imnandi ngokwaneleyo ukuba iqalise ukubhloga. Kodwa ukuba ufuna ukubonwa okanye ubeko ukuze ulingane ngakumbi kwisitayile sakho, unokufuna ukuthenga ifayile ye- umxholo we premium.
Xa uqala ibhlog kwiWordPress.com, kwinguqulelo yasimahla, uya kufumana igama lesizinda elijongeka ngoluhlobo: lakho-blog-name.wordpress.com. Umzekelo: kulima.wordpress.com. Ukuze ube negama lesizinda elingelo-wordpress.com, kuyakufuneka uphucule inkonzo yakho ukuze usebenzise i igama lesizinda.
I-WordPress.com, kwakhona, lishishini lezorhwebo ukuze, amaxesha ngamaxesha, baqhube iintengiso kwiindawo zebhlog zasimahla. Unokuthintela ukuba ezo ntengiso zibonise kwibhlog yakho ngokuthenga ifayile ye- Ixabiso Bundle. I-Bundle yexabiso ikwabonelela ngendawo eyongezelelweyo (kubalulekile ukuba unemifanekiso emininzi), ikuvumela ukuba ube nomxholo wesiko, kunye negama lesizinda.
Kukho izithintelo ekusetyenzisweni kweWordPress.com onokufuna ukuba uyiqwalasele. Sebenzisa nayiphi na iplagi oyifunayo ayinakwenzeka ukuba i-WordPress.com ayiboneleli ngokusemthethweni ngayo inkonzo. Umzekelo, uyafuna ukusebenzisa ifayile ye- Amabhukumaka amancinci Faka iplagi? I-WordPress.com ayinayo i-SexyBookmark njengenxalenye yeenkonzo eziphambili ze-plugin. Ufuna ukusebenzisa i Okulandelayo iplagi yolawulo lweendaba? Nale ayisiyonxalenye yesiseko seWordPress.com.
Oku akuthethi ukuba i-WordPress.com ayinazo izixhumanisi zokwabelana (bayakwenza, yabona Ukwabelana) okanye ulawulo lwamajelo eendaba (nabo banayo, yabona Ithala leendaba). Isizathu sokuba i-WordPress ithintele ukusetyenziswa kweeplagi kungenxa yokuba iiplagi zizisoftware ekufuneka zigcinwe ngokuhamba kwexesha ukuqinisekisa ngenkonzo esebenzayo yeWordPress.com. Ukuvumela nayiphi na iplagi kunokubangela inkonzo yeWordPress.com ukuba inyibilike kwaye, kwinkqubo, kubangele imiba nebhlog yakho.
Kutheni usebenzisa iWordPress.com? Esona sizathu sikhulu kukuba indleko, nokuba simahla okanye iinyanda zepremiyamu, zingaphantsi kunokuba ubambe kwaye kugcina Indawo yakho yeWordPress.org. Cinga ngento enikelwa yiWordPress.com, kwinguqulelo yabo yasimahla: iqonga lokubhloga elilungele ukuya kwiseva yewebhu abayilawulayo nabayigcinayo. Kwaye iinyanda zeepremiyamu, ezixabisa ukusuka $ 99 ku $ 299 (QAPHELA 2013 03 13: $ 99 ukuya kwi-299 yeedola ngonyaka), bathatha umsebenzi, ixesha, zi cwangciso, kunye nomzamo wokuqinisekisa ukuba ibhlog yakho iyafumaneka kwaye yazisa abaphulaphuli bakho. Emva koko unokugxila kubhloga, ukufumana ezo zimvo zinomdla kunye nokwabelana ngazo nabanye.
Kuthekani ngeWordPress.org, iWindowsPress yakho? Ngazo zonke ezi ngcinga zingasentla kwiWordPress.com, kutheni ungafuna ukukhuphela kunye nokuseta iWindowsPress kwindawo yakho ye-Intanethi?
Esona sizathu siphambili sokuba abantu abaninzi benze oku kungenxa yokuba ulawulo ngakumbi. Iiplagi kunye neewijethi ozikhethileyo zinokusetyenziswa. Umzekelo, ukuba ungumfoti ofuna ukwenza iifoto zeefoto zomsebenzi wakho emva koko iplagi yeendaba ye-NextGen yile nto uyifunayo. Okanye, ukuba ufuna ukwenza ngokwezifiso ukubukeka kwemixholo esisiseko efana nayo thesis or nesisekelo, emva koko iWordPress.org yeyakho.
Ukuba ufuna ukuqhuba ngokwakho iintengiso, i-WordPress eyenzelwe wena yinto oyifunayo. I-WordPress.com ayivumeli umntu ukuba aqhube iintengiso ezihambelana nayo okanye amanye amaphulo afanayo (jonga inqaku ku Advertising).
I-WordPress eyenzelwe wena inika ubhetyebhetye ngakumbi xa kuziwa kuseto kunye noqwalaselo. Nangona kunjalo, kolo bhetyebhetye kuza noxanduva. Unoxanduva lokusingatha (umzekelo kwinkonzo efana nale BlueHost), ulondolozo lwesoftware yebhlog njengoko kufuneka (iposti yembewu ivuliwe ukuphucula), Kunye zi cwangciso.
Ukhetha ntoni? Ukuba ulishishini ukuqala nje ukubhloga emva koko ndingacebisa iWordPress.com kwaye ndigxile ekuphuhliseni ibhlog yakho njengesiqhelo. Isizathu soku lixabiso lexesha lakho: uyafuna futz (ixesha elimnandi lokuchitha ixesha) ngeenxa zonke? Injongo yakho kukunxibelelana nabaphulaphuli, abathengi bakho, rhoqo. Iindleko zokuqalisa, nokuba iphakheji yepremiyamu, iphantsi xa kuthelekiswa nexesha lakho.
Kwaye ukuba awuyiyo ishishini kwaye ufuna nje ukubhloga, imodeli yasimahla ye-WordPress.com ilula ukuqala. Kwakhona, awunyanzelekanga ukuba u-futz, ukuvumela ukuba ujolise kumxholo kunye nokusebenza kweeblogi.
Emva kweenyanga ezintandathu, okanye kunjalo, ukubhloga (ngeveki, akunjalo?) Unokufuna ukuphinda usebenzise iWindowsPress.com. Cinga ngeshishini okanye ngebhlog iimfuno ezibalulekileyo ezingafezekiswanga. Ngezo mfuno zingafezekiswanga engqondweni unokwenza isigqibo sokufudukela kwibhlog yakho okanye hayi. Kwaye (nantsi into ebaluleke ngokwenene) ukufuduka usuka kwiWordPress.com uye kwiWordPress.org intle ngqo phambili. Iya kufuna ukucwangciswa nokuvavanywa kodwa inkqubo iyaziwa.
tags: kusingathwaWordPressyokupasa amagamawordpress.com
Mar 13, 2013 ngo 7:11 PM
Kuya kufuneka ngokupheleleyo, 100% ndingavumelani nawe kule nto, John! 🙂 Uchazile ukuba ulawulo ibiyinto ephantsi yokubamba kwiWordPress.com - ayikokulawula nje amawijethi kunye nemixholo kunye neentengiso. Ikwalulawulo lokwenza ngcono kunye ne-caching. Indawo ozibambele yona WPEngine inesiseko esomeleleyo ngakumbi, ulawulo lwesizinda, ukubekwa esweni kokhuseleko, i-backups, indawo yokubeka, i-console yolawulo oluqondisayo, inethiwekhi yokuhanjiswa komxholo, inkqubo yogcino lwenkqubo yobugcisa, ukufikelela kubalawuli beengcambu, ulawulo lwabasebenzisi… konke okungaphantsi kwe-99 yeedola ngenyanga. Musa ukucutha ukufakwa kwakho kweWordPress ngokuyibeka kwiWordPress.com - yinkcitha xesha ngokwenene.
Mar 15, 2013 ngo-1: 16 AM
Kuya kufuneka ndivumelane noDoug nakule. Ekugqibeleni, ayisiyiyo loo nto ingako yobunzima bokuhamba nomnye phezu komnye xa konke kusihla kuyo, kodwa ufumana ulawulo oluninzi xa usiya kwindlela yokuzibamba. Ngoku, ukuba umntu ufuna ukuphonononga i-WordPress kwaye "ukukhaba amatayara" ukuze athethe, ngoko useta indawo yakho kwisisombululo se-.com ukuba awufuni ukuchitha nayiphi na imali. Ingcono kakhulu kuneBlogger, kodwa ukuba ungoyena mncinci unzulu malunga nento oyenzayo kwi-Intanethi. Hamba nesisombululo se-.com, kwaye nabani na ofuna uncedo lokufumana izinto zokuseta kwaye zilungiselelwe bona, undazise.
Mar 15, 2013 ngo-1: 18 AM
kwakhona, Injini yeWP (ikhonkco ye-aff), ngoku ine-$ 29 / inyanga yokukhetha indawo enye. Inkonzo enkulu, inkxaso enkulu.
Jun 25, 2013 ngo-9:59 AM
eli linqaku elikhulu!
enkosi ngolwazi! izakwabelana...